Azụmaahịa Viral na-ezo aka na usoro ebe ndị na-ahụ maka ọdịnaya na-etinye aka na -emepụta ọdịnaya nke na-adị mfe ibugharị ma na-arụ ọrụ nke ọma ka ọtụtụ ndị na-ekerịta ya ngwa ngwa. Thegbọ ala bụ ihe dị mkpa - mkpa maka onye na-ajụ ase iji gbasaa site na ndị mmadụ karịa ịkwụ ụgwọ dị ukwuu maka nkwalite ma ọ bụ ikuku. Vidio ndị na-atọ ọchị bụ ihe ama ama, mana enwekwara memes oyiyi, yana ọbụnadị ihe mkpali na-arụ ọrụ dị ka ego otu.
site Emerson Spatz, ọkachamara na nje ịntanetị.
Mbipụta a masịrị ya nke ukwuu! Aga m ezo aka na ya ka anyị na-ahazi atụmatụ ahịa ọdịnaya nke anyị.
Ọ masịrị m ka ị siri kwuo na anyị ekwesịghị ime atụmatụ maka mbọ anyị na-agba ọsọ. N'ụzọ dị otú a, a na-azụlite ihe ndị bụ isi, a na-ahazikwa nkọwa ya nke ọma. Njikọ na ihe omume dị ugbu a nwere ike ịbụ ime ma ọ bụ mebie na mgbalị na-aga nke ọma ma ọ bụ na ọ bụghị, echiche na-atọ ụtọ.
Zack - n'ezie. Ọbụna ndị ọkachamara na-arụ ọrụ na mgbasa ozi mgbasa ozi nje maara na e nwere ihe ize ndụ nke ọ gaghị aga. N'ihi nke ahụ, anyị na-arụ ọrụ iji hụ na mkpọsa anyị na-agbakwụnye mgbe niile ụdị uru kama ịnwa ịchị ọchị ma ọ bụ dị egwu. N'ụzọ dị otú ahụ, ọ bụrụ na ha flop, ha ka nwere ike inye ụfọdụ uru na-ege ntị dị warara mkpa ruru!
Ezigbo post. Ọ masịrị m nke ukwuu. Daalụ maka ịkekọrịta ihe atụ ndị a. Enwere ọtụtụ ọrụ siri ike na ihe egwu metụtara mgbasa ozi nje. Ọ bụ ihe nwute, ma ọ bụrụ na ọ naghị aga viral mana m kwenyere kpamkpam na anyị ekwesịghị ịhazi mkpọsa ahụ na-eche na ọ ga-aga viral. Na-atụ anya posts ndị dị otú ahụ na-adọrọ mmasị.
Nov 4, 2016 na 8:55 ehihie
Ezigbo ihe atụ nke ahịa nje virus